किन गन्हाउँछ सास? यस्ता छन् समाधानका उपायहरु – Etajakhabar
किन गन्हाउँछ सास? यस्ता छन् समाधानका उपायहरु
ताजा खबर काठमाडौँ । अधिकांश मानिसलाई सास गन्हाउने समस्या हुन्छ। ‘दिनै दाँत ब्रस गरे पनि मेरो मुख साह्रै गन्हाउँछ’ भन्नेहरु धेरै भेटिन्छन्। ताजा सासले मानिसलाई अरुको अगाडि लज्जित हुनबाट जोगाउँछ भने दुर्गन्धित सासले तपाईंलाई मात्र होइन, तपार्इं वरपर बस्नेलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ।
सास गन्हाउनुका कारण ब्याक्टेरियाः मुखभित्र ब्याक्टेरिया भएमा सास गन्हाउँछ। ससाना ब्याक्टेरिया तपार्इंका दाँत र जिब्रोमुनि लुकेका हुन सक्छन्। यी ब्याक्टेरियाले मुखभित्र रहेर अन्य ब्याक्टेरिया उत्पादन गर्नुका साथै निरन्तर दुर्गन्ध छाडेका हुन्छन्, जसका कारण हाम्रो मुख नराम्रोसँग गन्हाउँछ।
टनसिलः टन्सिल फराकिलो र वरपर ससाना छिद्र छन् भने पनि सास गन्हाउँछ। बिहान–बेलुका खाएका खानेकुरा र चिल्लो पदार्थ यस्ता टन्सिल वरपरको छिद्रामा जम्मा हुने हुँदा दुर्गन्ध आउँछ।
तीक्ष्ण खानाः प्याज, लसुन, चाउचाउको धुलो, सुप र माछाका परिकार खाँदा मुख गन्हाउने हुन्छ। तसर्थ यी खानेकुरा खाएपछि तत्कालै दाँत सफा गर्नुपर्छ।
धूमपानः चुरोट सेवन गर्नेको सास सँधै गन्हाइरहेको हुन्छ । यस्तै, सुर्ती, गुट्खा खाने कुलत लागेका मानिसको मुखबाट दुर्गन्ध आउँछ । पेटको समस्याः कतिपय अवस्थामा आन्द्रा वा पेटमा समस्या हुँदा पनि मुख गन्हाउने गर्छ। पेटको अल्सर भएमा यस्तो समस्या आउँछ। त्यस्तै, कार्बोहाइड्रेड न्यून भएका खानेकुरा खाँदा पनि सासबाट गन्ध आउँछ। यस्ता खानाले ‘केटोन’ नामक दुर्गन्ध फाल्ने भएकाले सास गन्हाउने हुन्छ।
ताजा सासका लागि केही उपाय दाँत ब्रसः सास गन्हाउने समस्या छ भने, दिनमा दुई पटकसम्म दाँत माझ्नुपर्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै र बेलुकी खाना खाएपछि दाँत ब्रस गर्दा सास गन्हाउने समस्या केही हटेर जान्छ। दाँत माझ्दा जिब्रोलाई पनि राम्रोसँग घोट्नुपर्छ। ब्रसले घोट्दा जिब्रोमा अल्झिएका ब्याक्टेरिया बाहिर आई केही हदसम्म दुर्गन्धबाट मुक्ति मिल्छ। विशेष गरी जिब्रोको टुप्पो र टन्सिल रहेको ठाँउमा यस्ता ब्याक्टेरिया बसेका हुन्छन्। एक अध्ययनअनुसार जिब्रोलाई ब्रसले घोट्दा मात्रै पनि मुखको दुर्गन्ध ७० प्रतिशतले घट्छ।
सकभर नुनिलो टुथपेस्ट प्रयोग गर्नु राम्रो हो। यस्ता टुथपेस्ट दाँतलाई बचाउने मात्र होइन, मुखको दुर्गन्ध पनि हटाउन सहयोगी भएका छन्। विशेष गरी ब्रसमा एक चिम्टी नुन राखेर जिब्रो घोट्दा सास गन्हाउने समस्याबाट छिट्टै पार पाइन्छ।
पानीः पर्याप्त पानी पिउनु स्वस्थ मुखका लागि फाइदाजनक हुन्छ। मुख सुख्खा भयो भने पनि सास गन्हाउँछ। बिहान उठ्नेबित्तिकै ताजा र चिसो पानी पिउनु होला। समय-समयमा थोरैथोरै पानी पिउँदा पनि मुखबाट आउने दुर्गन्ध कम भएर जान्छ। स्वास्थ्यखबर पत्रिकाले छापेको छ ।
दहीः नियमित दही खाँदा पनि सास गन्हाउने समस्या केही हटेर जान्छ। दहीले नराम्रो ब्याक्टेरिया मारिदिने भएकाले खाना खाइसकेपछि नियमित दही खाँदा सासबाट गन्ध आउन छोड्न। अन्यः सासलाई ताजा राख्न चुइगम, सुकमेल लगायत चपाउन सकिन्छ। त्यस्तै, हर्बल टी र दालचिनीको सेवनले पनि मुख गन्हाउने समस्या घट्छ। ताजा स्याउ, केरा, सुन्तला, गाँजर र काँक्रो खाँदा पनि सास गन्हाउन कम हुन्छ।
उपचारः कतिपय अवस्थामा दाँतको समस्याका कारण पनि मुख गन्हाउने हुन सक्छ। यस्तै मुखभित्र केही समस्या छन् भने पनि मुख गन्हाएको हुन सक्छ। त्यसैले कम्तिमा ६ महिनाको एकपटक दन्त चिकित्सकसँग आफ्नो दाँत जचाउँनुपर्छ। मुख सँधै र अत्यन्त गन्हाउने भइरहेमा चिकित्सको सल्लाहमा उपचार गर्नुपर्छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ०९, २०७३ समय: ९:१०:२७